ओलीको निशानाले जसपामा भुइँचालो, फुट्न समेत तयार ! Canada Nepal
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओली लागिपरेका छन् । जसपाको समर्थन लिएर सरकार टिकाउने नत्र विभाजन गरेर भएपनि समर्थनमा ल्याउने रणनीतिमा ओलीका टिम लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निकट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अहिले जसपासंग बार्गेनिंगमा लागिपरेका छन् । जसपालाई सरकारलाई समर्थन गर्दा उपसभामुख देखि एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ भने जसपाले रेशम चौधरीको रिहाईको समेत माग राखेका छन् जुन टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
जसपामा अहिले सरकारमा जाने अफरले गर्दा भुइँचालो नै आएको जस्तो छ । जसपामा अहिले दुई चिरा परेको छ । पूर्व राजपाका नेताहरु जसरी पनि सरकारलाई समर्थन गरेर यो प्रतिनिधि सभा ५ वर्ष पूर्ण कार्यकाल चलाउन दिने तर्क प्रस्तुत गर्दैछन भने पूर्व समाजवादी पार्टीका शिर्ष नेताहरु भने केपी ओलीको विकल्प खोजेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठाईरहेका छन् ।
केपी ओलीको टार्गेटमा रामकुमारी झाँक्री देखि भिम रावल सम्म
महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहितका नेताहरु सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने जोड दिईरहेका छन् भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई भने केपी ओलीसंग कुनै हालतमा पनि सहकार्य गर्न नहुने जोड दिईरहेका छन् । उपेन्द्र यादव केपी ओली कै सरकारबाट बाहिरि सकेका हुन् त्यसैले पनि फेरि केपी ओलीसंग जानु भन्दा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससंग मिलेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
जसपाका एक नेताका अनुसार यदि सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने माग पूरा गरे राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकूर सहितका नेताहरु पार्टी फुटाएर भएपनि केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्म निधो गरेका छन् । नेता महतोले बाहिर खुलेर नभने पनि पार्टीमा यो कुरा प्रष्ट राखिसकेका छन् र महन्त ठाकूर पनि यसमा राजी भएको बुझिएको छ । उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईसंग रुष्ट भएका केहि नेताहरु समेत पार्टी फुटे पूर्व राजपा तर्फ जान तयार भएका छन् ।
जसपा भित्र अहिले भुइँचालो आएको छ । आज जसपाका शिर्ष नेताहरुको बैठक जारी छ । उपेन्द्र यादव र डा. भट्टराईलाई 'कन्भिन्स' गराउने कोशिशमा छन् नेता महतो र ठाकुर । संविधान संसोधनको मुद्दा बिर्सिनु नहुने तर्क डा. भट्टराईले राखेका छन् भने रेशम चौधरी रिहा गरे संसोधनको कुरा समेत मनाउन सकिने भन्दै बैठकमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दैछन ।
ओली, खनाल र गौतमको बाध्यात्मक अवस्था, अब सक्रिय राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने
महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पार्टी फुटाउनु परे बरु फ़ुटाउला भन्ने अभिव्यक्ति आफू निकट नेतासंग दिएको सुनेपछि अहिले उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई समेत आत्तिएका छन् । आज बसेको बैठकले सरकारमा जान के कस्तो सर्त राख्नुपर्ने वा यो सरकारलाई समर्थन नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी रहेको छ ।
फाल्गुण २७, २०७७ बिहिवार १५:१७:०७ बजे : प्रकाशित